Amai muri pfambi yemakoko – Makuhwa.co.zw
Amai muri pfambi yemakoko
PANE mukomana ari kuti amai vake ipfambi yemakoko uye vane marambadoro zvekuti kana vadhakwa vanozvipunzira pasi vachiumburuka izvo zvinomubvisa chimiro pakati peruzhinji. Wilson Kandemiri akataura izvi kumutongi wedare reHarare Civil Court, Barbra Mateko, mushure mekunge amhan’arirwa naamai vake, Irene Kunaka, vachiti anogara achivarova nekuvatuka zvinyadzi.
Kunaka ndiye akatanga nekuti: “Changamire, ndinototadza kuziva kuti ndakatadza papi pakurera mwana wangu uyu. Kubva zvandakanetsana nababa vake, ave kutoona kunge ndisiri chinhu. Anouya kumba pakati pehusiku otanga kundituka nekundirova.
“Ndakamboda kumusungisa asi nemoyo wekubereka, ndakanga ndisina kugadzirira kuona mwana wangu achitambura.
“Mwana wangu wekubereka iyeyu akandiudza kuti ndiri hure uye handikwanise kuita zvandinoda nekuti pamba apa ndepababa vake. Izvi aitaura mushure mekunge ndamutsiura kuuya neshamwari dzake pakati pehusiku uye kuti asapute mbanje.”
Kandemiri akaramba zvakange zvataurwa naamai vake achiti vakatanga kunetsana mushure mekunge ave kufarira baba vake sezvo amai vake vaida kuti avavenge.
Ini zviri kutaurwa naamai izvo manyepo nekuti chokwadi havadi kuti ndifarirane nababa vangu. Pandakange ndakavavenga zvinhu zvainge zvakanaka asi nekuti ndave kuvafarira, ndipo pakabva pasimuka mhepo dzeruvengo
“Chimwe chinhu ndechekuti amai vangu ipfambi yemakoko. Vanotori nemurume wavakambouya vakarara naye ini ndiripo.
“Pamusoro pazvo, vanodhakwa zvekutozvipunzira pasi chaizvo uye ndikada kuti nditi amai musaite zvinhu zvakadai zvinonyadzisa, ndipo vanotanga kuudza vanhu kuti ndinovarova.
“Hapana musi mumwe chete wandakaisa ruwoko rwangu pavari asi kuti ndinenge ndichitotambudzika kuti amai vanoraradza kunge munhu wechirume kudaro.
“Changamire, ndakatengerwa motokari nababa amai vangu vakatora matombo vachiitema-tema. Saka ndakabva ndabva pamba pacho mushure mekuona kuti handichatowirirane naamai vangu,” akadaro Kandemiri.
Akaenderera mberi achiti haapokane nechikumbiro chavo chekupihwa gwaro redziviriro.
Mutongi Mateko akapa gwaro redziviriro kuna Kunaka ndokuti vaviri ava vanofanirwa kugarisana zvakanaka uye Kandemiri anotarisirwa kunge achiremekedza amai vake.
Related Topics:Irene KunakaWilson Kandemiri
Akadya zizi mbishi: